Fanehoan-kevitra avy amin'ny John de Mols 'ANP copyright mpizara zon'ny mpamorona PermissionMachine.com: Martin Vrijland
Omaly tolakandro aho dia nahazo valiny avy amin'ny ANP an'i John de Mol bounty hunters (araka ny efa nolazaiko azy ireo ho tsotra) PermissionMachine.com. Ity orinasa ity dia toa mihaza ireo rehetra izay namoaka sary tao amin'ny vohikalany tamin'ny lasa. Izany dia nandeha nandritra ny taona maro tsy nisy fanehoan-kevitra na olana ary tampoka teo dia nisy avy amin'ny manga ny orinasa PermissionMachine.com. Tampoka teo dia nisy volavolan-dalàna. Izany rehetra izany tsy misy fampitandremana mialoha ary tsy mamela efitrano hafa vahaolana hafa. Mamaky ahy ianao lahatsoratra teo aloha fotoana vitsy mba hamelomana ny tantara ao anatin'ny fahatsiarovanao. Satria tiako ny fisokafana, nanapa-kevitra ny hamoaka ihany koa ny PermissionMachine.com aho. Vakio azafady ny taratasy azoko etsy ambany ary ny fanehoan-kevitra eto ambany. Mazava ho azy, nataoko ny angona manokana tsy hita maso, raha jerena ny lalàna AVG.
Ny fanehoan-kevitra nataoko tamin'ity, nandefa mailaka aho ary afaka mamaky etsy ambany.
Namaky ny soratrao aho. Miresaka momba ny 'vola natolotra' ianao. Tsy mahatsiaro aho fa nisy ny tolo-kevitra; ny fanerena. Ny fomba mahazatra mifandray aminao dia tsy maneho ny sombin'ny tolo-kevitra. Tolo-kevitra momba ny fifampiraharahana. Ny famaritana ny teny fanoloran-teny dia ara-bakiteny: 'drafitra iray izay manolotra'.
Jereo ity tranokala ity ho an'ireo famaritana:
Na izany aza, satria efa namariparitra ny habetsaky ny taratasinao teo aloha ianao ho 'vola natolotra', dia azoko lazaina anao fa tsy manaiky ny soso-kevitrao aho. Miverimberina foana ny soso-kevitrao. Ny volavolam-panolanana dia tsy raisina. Araka ny famaritana nomenao ahy ny zo handà ny drafitrao. Ataoko izany.
Manao ezaka ihany koa ianao mba hanamarina ny 'volavolanao kasainao', amin'ny filazana fa 'fandaniana mahazatra' izany. Na izany aza, ny famaritana ny soso-kevitra dia hoe mamela efitrano fandavana izany. Manolotra zavatra ianao, saingy aza avela hisy ny fandavana. Ambaranao fa tsy azo atao ny mandefa fampitandremana. Te-hihaino anao aho ary hijery raha nanao fandalinana azo tsapain-tanana izay mampiseho izany ianao. Afaka mandefa kopia izany amin'ny alàlan'ny famerenana? Mieritreritra aho fa tsy azo atao izany ary koa mifamaly fa ireo orinasa izay nividy fahazoan-dàlana ho an'ity (tokony hividianana ny sandan'ny fandefasana fampitandremana). Tahaka ny anao manokana izany main business dia ny mametraka orinasa amin'ny tendany.
Tsy azoko atao ny manalavitra ny fahatsapana fa mampiasa botsika ianao mibaribary ny aterineto ho an'ny sary izay mety hipetrahan'ny ANP. Mieritreritra aho fa ity dia dingana efa natao ho azy, satria toa toa sarotra ho an'ny olona (manuell) izany. Manahy mihitsy aza aho milaza fa ny sary tranainy mifototra amin'ny rakitra Exif sary dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny bots (AI) na karazana automatisation. Na izany aza, ao amin'ny taratasy nalefanao tamin'ny Jolay 2 dia mihevitra ianao fa misy dingana arahina. Raha miseho eo anatrehan'ny fitsarana ity raharaha ity dia hangataka fangatahana feno ihany koa amin'ny fomba amam-panao sy ny rafitra sarany.
Mazava ho azy fa ianao dia miampanga ny fanazavanao rehefa miresaka momba ireo orinasa mividy fahazoan-dàlana amin'ny 'làlana marina'. Amin'izay ianareo dia mihevitra fa ireo olona izay mametraka sary amin'ny tranokalany miaraka amin'ny fikasana tsy niniana dia mikasa ny hanao ny tsy rariny. Ny fanontaniana mipoitra dia ny famaritana ny hevitrao momba ny 'lalana marina'. Mieritreritra ve ianao fa fomba tsara ny manao raharaham-barotra, milaza fa manao tolo-bidy ianao, fa tsy avelanao hijanona? Izany dia endrika iray amin'ny 'fametrahana ny antsy eo amin'ny tendany'. Ny endrika marina dia ny handao ny efitrano fandavana anao amin'ny soso-kevitrao ary koa maneho fa manana ny toerana hamafana ireo sary ianao. Koa na dia manome ny fahatsapana ny fanolorana soso-kevitra aza ianao, aza avela hisy toerana.
Azonao atao ny mampitaha ny fomba ny manao zavatra mety ho kely izany - taorian'ny taona maro - mandefa ny faktiora ho namana iray izay tsy mahafantatra fa ny alatsaka hamonjy ny taona maro no voatanisa amin'ny saha sisin-taniny. Miala amin'ny toerana hamahana zavatra amin'ny fifampiresahana tsara ianao. Alefaso fotsiny ny faktiora ary lazao fa tsy ilaina intsony ny mamafa ireo sary. Ny fandoavanao no safidy tokana.
Asehonao fa raha mampitandrina mialoha ianao dia mila mandoa bebe kokoa ny orinasa izay efa nahazo alalana hividy ny vidin'ny fampitandremanao. Tiako ny hijery fandalinana fepetra izay maneho izany. Noho izany ao amin'ny paragrafy izay ambaranao izany dia milaza koa ianao fa tsy manao ny tsy marina aho; izay misy olon-kafa mividy fahazoan-dalana. Hitako ny famaritana ny atao hoe rariny ary inona no tsy rariny raha misy fifandirana mahery vaika. Hitako ny fomba fanaovanao raharaham-barotra tena tsy rariny. Raha nanao soso-kevitra izay mamela efitrano fifampiraharahana ianao dia hisy ny marina.
Milaza koa ianao fa misy zavatra tsy "fikasana". Azonao omena anao ve ny famaritana mazava momba ny 'fikasana'? Amin'izany toe-javatra izany, mety ilaina ny mitondra ity sary manaraka ity an'i Theo Maassen aminao.
Na dia ao amin'ny fehin-kevitra farany aza ianao dia manandrana mandresy lahatra momba ny hoe na tsy hampihatra ny zo hiteny aho, dia mametra ny valinteniko amin'ny fandavana ny isa napetrakao. Mandà ny soso-kevitrao amin'ny ankapobeny aho ary tsy handoa karama.
Farany, ao amin'ny taratasinao dia milaza ianao fa manohitra ny faktiora amin'ny laharana 20180000001. Azoko lazaina aminao fa tsy fikasana izany. Navelako tamim-pomba tsy an-kijanona anao ny fanoherana na ny fanoherana ary tsy manao izany imbetsaka. Tsy ny fikasana handraisanao vola avy amin'izany ihany koa. Ny fikasana fotsiny no handoavana ny faktiora amin'ny fotoana sy ny fotoana. Noho izany, mangataka aho (azafady hoe: tsy 'proposition' ity) fa handoa vola avy hatrany ity volavolan-dalàna ity, miaraka amin'ny vidin'ny fampahatsiahivana ao amin'ny 500. Raha ampidirina dia hahita ny faktiora amin'ny laharana 20180000002 ianao, izay ahitanao ny vidin'ny fampahatsiahivana ho an'ny faktiora teo aloha. Hahita ihany koa ny vidin'ny fanoherana ao amin'ny taratasinao. Izany dia mitondra ny totalim-bola tsy maintsy aloanao amin'ny € 7.000 (fito arivo euros), ny dimy arivo amin'ny faktiora teo aloha ary ny roa arivo ho an'ny faktiora vaovao. Tsy misy volavolan-kevitra maromaro izy ireo, fa vola voafetra. Ny fepetra takina dia ny mandoa izany amin'ny alàlan'ny famerenana; tamin'ny farany ny 7 Jolay 2018.
Miandry ny vola aloanao.
Tsy mazava izao fa misy ny vahaolana ho an'ny hoavy filazana ny PermissionMachine.com (izao no miasa ho an'ny John de Mol, vaovao miliaridera determiner alalan'ny ANP). Na izany aza, tsy manala ny fifandirana efa misy izany. I John De Rol, na izany aza, mafy voalazako taminao va fa tsy aho hanaisotra ny zava-misy fa ny miliaridera sy PermissionMachine.com afaka milaza fa mandalo aho mandra-hitsahatra ny dingana ratsy.
Raha te-hahalala misimisy kokoa momba ny vahaolana amin'ireo fanambarana amin'ny ho avy avy amin'ny PermissionMachine.com, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana. Raha te hampiasa ny endrika fifandraisana ianao dia tsy maintsy manaiky ny zo manokana momba ny tsiambaratelo. Azo atao izany amin'ny alàlan'ny famoaham-pehezan'ny AVG izay miseho rehefa mitsidika ity tranokala ity ianao na rehefa avy nodiovinao ny cookies amin'ny Internet.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny NOS sy ny polisy dia afaka manaporofo ny porofo diso sy ny hoe azo ambara ny alibi
Moa ve misy 'fihaonana' amin'ny hetsika ara-panatanjahantena lehibe toy ny World Cup sy Formula 1?
Tags: ANP, fianakavian'ny mpanjaka, Fitarainana, Copyright, Featured, sary, sary, john de mol, lisansy fahazoan-dalana, permissionmachine.com, sary, fiarovana
3 Jolay 2018 ao amin'ny 15: 02
Noho ny fahadisoan'ny fiteny sy ny fitsipi-pitenenana ao amin'ny taratasy fanomezan-dàlana Permissionmachine, toa toa ity taratasy ity dia nosoratan'ny bot ...
... na ny ankamaroan'ny olona, ​​ankehitriny, ny Fu (n) d (k) tion no nahavita hiondrana an-soulless rafitra ho soulless sy solon-mpiasa, malemy paika sy hanaiky manatanteraka ny asa, taorian'ny taona maro ny dehumanizing pana sy ny fandaharana ho satria efa nodimandry tanteraka sy tsy nisy aina ary fahafatesana ny atidoha, ka mbola mandeha any amin'ny polonaise manoloana ireo trano famonoana.
Faly aho fa Martin!
Anisan'ny vondron'olona vitsivitsy izay sahy niaina!
3 Jolay 2018 ao amin'ny 15: 49
Ny anarana Fahazoan-dàlana Permis, raha ny marina, dia manondro ny milina iray. Nahoana no tsy nisy anarana nofidiana izay manondro ny hetsika an-tànana mba hamaritana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ny anaran'ny orinasa irery ihany no mifanohitra amin'ny votoatin'ilay taratasy - izay milaza fa misy ezaka amin'ny tanana.
Misy "machine" mazava tsara izay manao ilay asa.
kolikoly nanoratra hoe:
4 Jolay 2018 ao amin'ny 09: 45
Ity lahatsoratra ao amin'ny tranokalan'ity fikambanana parasitic ity dia milaza fa ampy:
"Ny mpiara-miasa amin'ny fiarovana ny zon'ny mpamorona anao. Vola bebe kokoa noho ny ezaka kely. "
Na dia izany aza dia tsy manaiky ny lalàna lalàna izy ireo na dia afaka mamela ny angon-drakitra any aza ianao.
Ireo karazam-pihetseham-po manerana ny firenena izay miasa miaraka amin'ny tanjon'ny fidiram-bola tsy misy ezaka dia fampivoarana mahatsiravina. Io voka-dratsy io dia tsy maintsy hitarika amin'ny kolontsaina vaovao vaovao. Te hilaza aho fa hampiasa azy ireo mivantana. Manana ny angon-drakitrao izy ireo.
Ny vokatra farany dia fiarahamonina izay tsy misy olona afaka miasa ara-dalàna afa-tsy ny renivohitra lehibe izay tsy misy lalàna mihatra. Miankina amin'ny fiarahamonina iray izay mifandray amin'ny raharaha tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy, raha tsy amin'ny fanandevozana. Miantso ny fifindran'ny angovo ho an'ny olana iray tsy misy aho, amin'ny alahatry ny vahoaka, ny herinaratra rehetra dia ny hanjary fihomehezana. Ankoatra izany, amin'ny maha-mpandraharaha anao ianao dia tokony handrakotra ny andaniny rehetra mba hahafahany miasa fa tsy miondrika amin'ny vokatra izay tsy manam-potoana intsony amin'ny fandraharahana.
Ny VVD dia ohatra tsara dia tsara amin'ny kolikoly rehetra amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny hetra ho an'ny fifehezana ny fitondram-pandevenana ny mpitantana ny fandevenana ao anatin'ny laharana misy azy. Ilay mpandraharaha madinika na mpanao gazety tsy misy mpanohana dia rendrika ("tsy misy ezaka") ka tsy azo atao intsony ny miasa.
4 Jolay 2018 ao amin'ny 11: 23
SARIPIKA: Ho tonga amin'ny serasera ao amin'ny VVD ny talen'ny fandevenana ????
4 Jolay 2018 ao amin'ny 19: 57
Mbola misy klioba miavonavona izay PermissionMachine bvba
gronz23 nanoratra hoe:
4 Jolay 2018 ao amin'ny 21: 55
Tonga tampoka i Martin, ary tena sarobidy ny fampahatsiahivana. Afaka manohitra izay tiany izy ireo, nefa tsy maintsy mandoa.
5 Jolay 2018 ao amin'ny 09: 27
Nantsoiko hoe Talpa Network tao Hilversum aho ary nangataka an'i John de Mol. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra, dia hantsoin'ny mpitondra teniny aho, izay mbola hangatahako an'i John de Mol mba hiresaka am-pahibemaso.
Hanoratra ity tafatafa ity aho ary hamoaka izany amin'ny alàlana (mifandraika amin'ny lalàna AVG). Raha tsy manome alàlana izy dia heveriko fa hamoaka izany.
Te-hahatsapa fotsiny ny fomba fiasan'ny Fahazoan-dàlana Permis aho. Amin'ny maha-tompon'ny ANP azy, izy no tompon'andraikitra farany amin'ny fanangonam-bola amin'ny alalan'ny ANP.
« Moa ve misy 'fihaonana' amin'ny hetsika ara-panatanjahantena lehibe toy ny World Cup sy Formula 1?
Vokatry ny raharaha Anne Faber, araka ny famaritana TBS bebe kokoa tsy misy fikarohana ara-pahasalamana »
Total visits: 12.904.298
Mifandraisa anjara amin'ny 1.642 hafa